Truth Post Nepal | क्‍वारेन्टाइनबाटै संक्रमित भागाभागः कोही रुख चढेर लुके, केही रातभर कुलोमा सुते ! - Truth Post Nepal क्‍वारेन्टाइनबाटै संक्रमित भागाभागः कोही रुख चढेर लुके, केही रातभर कुलोमा सुते ! - Truth Post Nepal
क्‍वारेन्टाइनबाटै संक्रमित भागाभागः कोही रुख चढेर लुके, केही रातभर कुलोमा सुते !
ट्रुथपोस्ट May 24, 2020
नेपालगन्ज,११ जेठ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनबाट शुक्रबार १३ जना संक्रमित भागेका छन् । संक्रमण पुष्टि भएको खबर सुनेसगै उनीहरू भागेका हुन् । कोही भागेर रुखमा चढेर लुकेका थिए भने कोही कुलोमा गएर सुतेका थिए । स्थानीयका अनुसार केही व्यक्ति दशगजाको खाल्डोमा गएर बसेका थिए । छिटो आइसोलेसन सेन्टरमा पुर्‍याउनु पर्ने संक्रमित भागेको खबरले जिल्लाभरिकै अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो ।
गाउँपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद शाहले स्थानीय नेताले ‘भ्रम’ फैलाएका कारण कोरोना संक्रमितले क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने प्रयास गरेको बताए । ‘जान्ने बुझ्नेहरू पनि भ्रम फैलाइरहेका छन् । कोरोनामा पनि राजनीति भयो । किड्नी झिकिन्छ भन्ने अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता भ्रम फैलाउनेलाई प्रशासनले किन कारबाही गर्दैन रु संक्रमित भगाउनेलाई किन संरक्षण गरिएको छ ?’
कोरोना संक्रमण फैलिरहेका बेला पनि राजनीति हुनु दुस्खद भएको जिल्ला प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० शिवबहादुर सिंहले बताए । संवेदनशील समयमा सबैलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । ‘संक्रमितलाई उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याउँदा पनि विरोध हुनु राम्रो होइन । यस्तो संकटका बेला सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने वातावरण छैन । यस बेला बल प्रयोग गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।’
उक्त पालिकामा क्वारेन्टाइन नै कोरोना भाइरसको ‘इपी सेन्टर’ बनेको छ । व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नहुँदा र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले दूरी कायम नगर्दा संक्रमण बढेको हो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड, ०७६ अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्दा संक्रमण बढेको भेरी अस्पतालका कन्सलटेन्ट प्रमुख फिजिसियन तथा मेडिकल विभाग प्रमुख डा। राजन पाण्डेले बताए ।
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लापरबाहीको आरोपमा रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–६ का बासिन्दाले शनिबार बिहान प्रदर्शन गरेका छन् । वडाको बोगडी मावि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको भन्दै गाउँले प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवविरुद्ध नाराबाजी गरे । क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिस र रेखदेखमा खटिएका कर्मचारीले लापरबाही गर्दा बस्तीमा संक्रमणको जोखिम बढेको उनीहरूको आरोप छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकाले खेर गएको खाना प्लास्टिकको झोलामा राखेर सडकमा फ्याँक्ने गरेको र कर्मचारीले बचेको खाना–खाजा घर लैजाँदा जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति पसलमा जाने, सामान किन्ने गरेकाले पनि त्रास फैलिएको गुनासो गरे ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा शनिबार २७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि एउटै पालिकामा संक्रमितको संख्या ११४ पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
(बाँकेको जमुनाहास्थित नेपाल–भारत सीमा नाका नजिकै रहेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय परिसरमा शनिबार भारतबाट आएर अलपत्र परेका नेपालीको भीड । तस्बिर : काशीराम शर्मा)